ज्योतिषशास्त्र अनुसार यौन रोग र हस्तमैथुन गर्ने बानी कसरी, किन हुन्छ ? जान्नुस् - IAUA
ramkrishna October 3, 2017	किन हुन्छ ? जान्नुस्ज्योतिषशास्त्र अनुसार यौन रोग र हस्तमैथुन गर्ने बानी कसरी
(डा. सुनील ज्योतिषी हुनुहुन्छ, यहाँको यो लेख उहाँको स्वीकृतिमा उहाँको ब्लगबाट साभार गरिएको हो) सम्पादक ।
Previous Previous post: वास्तुशास्त्र अनुसार घरमा घडी कता राख्ने ?
Next Next post: कस्तो हुन्छ कुन बार जन्मिनको मान्छेको स्वभाव र भाग्य थाहा पाउनुस् ।